Stratis 2.2 biara na ndozi maka D-Bus, mbipute CLI na ndi ozo | Site na Linux
Stratis 2.2 biara na ndozi maka D-Bus, mbipute CLI na ndi ozo
Hasdị ọhụrụ nke Stratis 2.2 ewepụtalarị ọ dịkwa maka ọha na eze. Versiondị ọhụụ a rụrụ ọrụ iji tinye ihu D-Bus iji soro ndị ọrụ ngọngọ na mgbanwe ndị ọzọ nwee mmekọrịta.
Maka ndị na-amaghị Stratis, ị kwesịrị ịma na nke a bụ daemon nke Red Hat mepụtara na obodo Fedora iji jikọọ ma mee ka ntọala oghere ọrụ ndị ọrụ dị mfe nke na-ahazi ma nyochaa ihe ndị dị ugbu a nke Linux nchekwa nchekwa nke LVM njikwa olu na XFS faịlụ sistemu D-Bus.
Stratis peeji nkena-enye ọrụ dị ka ikpo oke, snapshots, iguzosi ike n'ezi ihe, na mkpuchi mkpuchi. Edere koodu oru ngo a na Rust ma kesaa ya n'okpuru ikike MPL 2.0.
Usoro n'ụzọ dị ukwuu na-ekwughachi ngwá ọrụ dị elu na ike ya iji jikwaa ZFS na Btrfs nkewa, mana etinyere ya dị ka akwa oyi akwa (stratisd daemon) na na-agba ọsọ n'elu Linux kernel ngwaọrụ mapper subsystem (dm-mkpa, dm-cache, dm-thinpool, dm-wakporo na dm-mwekota modulu) na sistemu faịlụ XFS. N'adịghị ka ZFS na Btrfs, Stratis components na-arụ ọrụ naanị na ebe ọrụ ma anaghị achọ itinye modulu kernel ụfọdụ.
A nwalere Stratis site na ngọngọ ngwaọrụ dabere na LUKS (akụkụ ezoro ezo), mdraid, dm-multipath, iSCSI, LVM logical volumes, na ọtụtụ draịva ike, SSDs, na NVMe draịva Site na diski dị na otu ahụ, Stratis na-enye gị ohere iji nkebi ezipụ nkebi iji weghachite mgbanwe ndị ahụ.
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke Stratis 2.2
2 Etu esi etinye Stratis?
Main ọhụrụ atụmatụ nke Stratis 2.2
Ntughari 2.2 agbakwunye nhọrọ ọhụrụ maka ihu D-Bus iji nweta Njirimara (FetchProperties), jikwaa (Onye njikwa) ma soro ndị na-egbochi ngwaọrụ (Blockdev) na-emekọrịta ihe.
Agbakwunyere ikike nke ịkọ banyere omume nke ihe omume na njikọ na mwepụ nke ihu (InterfacesAdded and InterfacesRemoved) site D-Bus. Emeghari ederede Bash emezigharịla na uru stratis-cli.
Stratis nke 2.2.0 tinye ugbua akara a site na Stratis filesystem na / dev / stratis, kama / stratis, gbakwunyere njikọ ihe atụ site na iwu udev ma jigide ya, kama site na stratisd dị ka ọ dị na mbụ. Emeghị / stratisdirectory site na stratisd 2.2.0.
Versiondị a ọnọdụ nhazi njikwa nhazi maka ntinye mmekọrịta nke igodo ezoro ezo na stratisd kama stratis-cli.
Akwụkwọ shei na-adabere na obere ederede Rust, stratis_dbusquery_version nke a gụnyere na ụdị nke stratisd.
Versiondị a Ọ na-agbatịkwa D-Bus interface n'ọtụtụ ụzọ:
Tinye ihe onwunwe D-Bus PhysicalPath ọhụrụ, maka org.storage.stratis2.blockdev.r2interface. Ihe onwunwe a bara uru maka ngwaọrụ ezoro ezo nke Stratis; Na-achọpụta ngwaọrụ ngọngọ nke Stratis LUKS2 metadata bi.
Tinye igodo ohuru, LockedPoolsa na org.storage.stratis2.FetchProperties.r2interface maka ihe na-emejuputa org.storage.stratis2.Managerinterface. Igodo a laghachiri ihe D-Bus nke na-egosi UUID nke ìgwè ndị ekpochiri na nkọwa nkọwa ha kwekọrọ.
Ntọhapụ a na-enye onye ọrụ ohere ịkọwa ọkwa osisi ha chọrọ ka ọ dịkwuo nkenke na –log-levelopment CLI.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele ndepụta nke mgbanwe Na njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye Stratis?
Stratis dị maka RHEL, CentOS, Fedora na nkwekọrịta. Ntinye ya dị mfe, ebe ngwugwu ahụ dị n'ime ebe nchekwa RHEL yana ihe mgbakwasị ụkwụ ya.
Iji wụnye Stratis dị nnọọ na-agba ọsọ na-esonụ iwu na a ọnụ:
Ma obu inwere ike nwale nke ozo:
Ozugbo arụnyere na sistemụ, ga-emerịrị ọrụ Stratis, ha na-eme nke a site na itinye iwu ndị a:
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nhazi na ojiji, ị nwere ike ịga na njikọ ndị a. https://stratis-storage.github.io/howto/
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Stratis 2.2 biara na ndozi maka D-Bus, mbipute CLI na ndi ozo
Nweta nnabata abuo nke EnterpriseDB nwere ike buru nsogbu nye obodo
24H24L: Ihe omume Linuxero ohuru gbadoro anya na ndi oru ohuru